China Stamping robhoti ye otomatiki dhizaini yekugadzira mutsara Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
HY1010A-143 irobhoti 6 axis inobata iro rinogona kushandiswa Kubata, palletizing uye depalletizing.
Pano inoshandiswa kutsika basa remuchina wekudhinda.
zviri pasi apa:
-Big kusvika uye mutoro: 1430mm, 10kg mutoro;
-Stable uye Long waranti: 2 makore;
HY1010A-143 irobhoti 6 axis inobata iro rinogona kushandiswa Kubata, palletizing uye depalletizing.Pano inoshandiswa kutsika basa remuchina wekudhinda.Kune mamwe mamiriro akakosha, zvikamu zvinozofanira kushandura yakawanda pose kuitira kuti isangane nezvinodiwa nemuchina wekudhinda, Saka mhinduro dzinokumbira imwe DOF (dhigirii rerusununguko) yerobhoti.1430mm ruoko kusvika ne10kg mutoro unogona kusangana nemhando dzakawanda dzemuchina wekudhinda.
6 10KG ±0.08 3kva 0-45 ℃ Hapana hunyoro 170kg Pasi/madziro/ceiling IP65
Robhoti ine 1 yekunze axis
Auto zvikamu Robot
Wese mutengi anofanira kuziva YOOHEART robhoti yakanaka vasati vatenga.Kana vatengi vaine imwe YOO HEART robhoti, mushandi wavo achave ne3-5 mazuva emahara kudzidziswa muYunhua fekitori.Pachave neboka reWechat kana WhatsApp group, ma technician edu anotarisira mushure mekutengesa service, magetsi, hard ware, software, nezvimwe, zvichave mukati. Kana dambudziko rimwechete rikaitika kaviri, nyanzvi yedu inoenda kukambani yevatengi kunogadzirisa dambudziko. .
Q. Ndeupi musiyano uripo pakati pe 6 axis stamping robhoti ne 4 axis stamping robhoti?
A. Iwo ese ndeekudhinha marobhoti emuchina wekutsikirira, kana muchina wako wekutsikirira uchida mamwe mapose, robhoti 6 axis richava nani.Kana zvisiri, unogona kusarudza 4 axis stamping robhoti.
Q. Mangani ekutsika marobhoti achashandiswa kune yakazara otomatiki stamping mutsara wekugadzira?
A. izvo zvinoenderana, kazhinji muchina wekutsikisa mumwe unoda rimwe robhoti rinotsika.
Q. Vangani vashandi vachazodiwa pamutsara wekutsika?
A. 1-2 mushandi wegumi mayunitsi ekutsika marobhoti.
Q. Ndinogona kutumira murume wangu kufekitari yako kuti adzidziswe?
A. chokwadi, iwe uchave nekudzidziswa kwemahara mufekitori yedu.Uye iwe unogamuchirwa nguva dzose pano.
Q. Wakambopedza otomatiki stamping mutsetse wekugadzira pamusika wegungwa?
A. Parizvino, hatina.
Zvakapfuura: Stamping Robot
Zvinotevera: Palletizing robhoti Uye Depalletizing robhoti